हामी संख्यामा भन्दा गुणमा नयाँपन खोजिरहेका छौँ- दाहाल
नयाँ शक्ति नेपालले यही जेठ ३० गते औपचारिकरुपमा पार्टी घोषणा गर्दैछ । राष्ट्रिय भेलाका लागि तयारी अत्यन्तै तीव्र गतिमा भइरहेको छ । विभिन्न समिति तथा उपसमिति बनाएर काम भइरहेका छन् । सोही भेलाको तयारीसहितका विषयमा हामीले नयाँ शक्ति नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा अनुगमन विभाग संयोजक केशव दाहालसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
नयाँ शक्ति नेपाल अहिले कुन चरणमा छ ?
नयाँ शक्ति नेपालको जन्म र विकास नेपाली राजनीतिको एउटा नयाँ प्रयोग हो । त्यसैले हामीले यसलाई एउटा पार्टीको रुपमामात्र स्थापित गर्न खोजीरहेका छैनौ । बरु हामी नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक धारको निर्माण गर्न चाहन्छौँ । यसको सुरुवात निकै ब्यापक र गहिरो वहसबाट भयो । हामीले देशब्यापी छलफलहरु चलायौँ । पहिलो चरणमा यो वहसको पक्षमा हामीले जनतम निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्यौँ । देशव्यापी विमर्शहरु भए । कस्तो पार्टी बनाउने ? किन चाहिन्छ नयाँ शक्ति ? यस्ता विषयमा विचार उत्तेजक अन्तरक्रियाहरु चले ।
यद्यपि यो वहस निकै खुल्ला थियो । कुनै संरचना थिएन । विस्तारै वहसमा नजीक हुनेहरुको संरचना बन्दैगयो र हामीले यसलाई संगठित रुप दियौं । यो दोश्रो चरण थियो । यो चरण यति सुखद बन्दै गयो कि यसैको आधारमा हामी पार्टी निर्माणको तेश्रो चरणमा आईपुग्यौं । हामी जेष्ठ ३० गते पार्टीको घोषणा गर्देछौं । एकलाख संस्थापक सदस्य एकैसाथ सामुहिक सपथग्रहण गर्दैछौं । यसरी हेर्दा वैकल्पिक राजनीतिको वहस संगठित पार्टीको स्वरुपमा विकास भएको छ ।
अहिलेसम्म कति पुगेको छ पार्टी सदस्यता ?
हामी संस्थापक सदस्यहरुको अभिलेखनको काम गरिरहेका छौँ । पछिल्लो तीन महिनामा हामीले २ लाख सदस्यता फारम वितरण गरेका थियौं । एकलाख संस्थापक सदस्य बनाउने हाम्रो योजना हो । सबै विवरण आईपुगेको छैन । त्यति सदस्यता वितरण भएको हुनुपर्छ । यद्यपि हामी संख्यामा भन्दा गुणमा नयाँपन खोजीरहेका छौं ।
जेठ ३० गतेका लागि आयोजित भेलाको तयारी कस्तो हुँदैछ ?
नयाँ शक्ति नेपालको पहिलो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला एउटा राजनीतिक उत्सव हो । त्यसैले यसको तयारी भब्य छ । हामीले जेष्ठ ३० गते पार्टीको घोषणा गर्दैछौँ । जेष्ठ ३१ र ३२ गते पार्टीको छलफल सत्र हुदैछ । यो यसकारण भव्य छ कि हामीले निकै सुन्दर विचारहरुलाई संश्लेषण गरेर तीनवटा दस्तावेज बनाएका छौँ । यी दस्तावेजहरु बनाउन हामीले सयौ अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्‍यौँ, हजारौँ विचारहरु सुन्यौँ र त्यसको संश्लेषण गर्‍यौँ । त्यसैको परिणाम हामीसंग हाम्रो राजनीतिक मार्गदर्शन, विधान र संमृद्धि को कार्ययोजना छ ।
यो भेलापछि हामी आधिकारिक रुपमा पार्टीका वैकल्पिक प्रस्तावहरु दिनेछौँ । भेलाको तयारी यसकारण पनि भव्य छ कि हाम्रा सबै संस्थापक सदस्यहरु सामूहिक सपथग्रहणका लागि काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ ।
हामीले हाम्रा समर्थक र सुभचिन्तकहरुको सहभागिता पनि व्यापक हुने विश्वास गरेका छौँ । देश विदेशबाट हामीलाई शुभकामना दिनेहरुको संख्या पनि ठूलै हुनेछ । अर्कोतिर भेलाको व्यववस्थापन सुन्दर छ । यसकालागि हामीले व्यवसायिक संस्थासँग सहकार्य गरेका छौँ ।
हामीले प्रचार प्रसारका लागि वाल पेन्टिङ गर्ने र पोष्टर टाँसेर शहर फोहोरगर्ने काम गरेका छैनौं । बरु अन्य वैकल्पिक प्रचार साधनहरु प्रयोग गरेका छौं । पार्टी घोषणासभा दशरथ रंगशालामा हुदैछ । त्यो हेर्न लायक हुनेछ ।
छलफल सत्र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुनेछ । त्यो विचार मंथनको उत्कृष्ट थलो हुनेछ । हामीले छलफललाई निकै भव्य र परिणामुखी बनाउने तयारी गरेका छौं ।
मलाई लाग्छ, हामीले ऐतिहासिक घटनालाई तयारीको हिसाबले पनि ऐतिहासिक बनाउने छौं ।
घोषणासभामा कति सहभागिता हुन्छन् ?
घोषणासभामा सम्पूर्ण संस्थापक सदस्यहरुको सहभागिता हुनेछ । देशभरी र विदेशबाट समेत २२ देशका साथीहरुको प्रतिनिधित्व हुन्छ । उद्घाटन सत्रमा ५ सय अतिथिहरु आउनुहुनेछ । जनसमुदायको पनि उल्लेख्य सहभागिता हुन्छ ।
राजनैतिक, कार्यक्रमिक र साँगठनिकरुपमा के नयाँ आउँदैछ, जसले तपाईंहरु वैकल्पिक शक्ति हो भन्ने पुष्टि गरोस् !
पार्टी स्थापनाको प्रकृया नै नयाँ छ । यो पुराना पार्टीहरुबाट विभाजित भएर बनेको पार्टी होईन । यो पार्टी हजारौ विचार, परामर्श, छलफल र स्वामित्वबाट बनेको पार्टी हो । हाम्रा पुराना कुनैपनि पार्टीहरु यसरी बनेका होईनन् । राजनीतिक रुपमा हामी समुन्नत समाजवाद उन्मुख बाम लोकतान्त्रीक शक्तिको रुपमा यसलाई स्थापित गर्दैछौँ । नेपालमा यस्तो विचार राख्ने पार्टीहरु छैनन् । हामीसँग या त परम्परागत प्रजातन्त्र भन्नेहरु छन् या त माक्र्सेली समाजवाद । हामीले सहभागितामुलक लोकतन्त्र र समुन्नत समाजवाद भनेका छौँ ।
यी विल्कुलै नयाँ र आजको सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्ने विचारहरु हुन् । हामी अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको रुपमा स्थापित गर्दैछौँ । नयाँ शक्ति कार्यकर्ता नियन्त्रित पार्टी हुनेछ । हामी पार्टिभित्र शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास गर्न गइरहेकाछौँ । हाम्रो पार्टीमा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अंगहरु अलगअलग हुनेछन् । त्यसैगरी हामीले पार्टीको अन्तरिक न्यायप्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन लोकपालको अवधारणा ल्याएका छौँ । पार्टीभित्र निर्वाचन आयोग र लेखा आयोग जस्ता वैधानिक अंगहरु हुनेछन् ।
हामी शक्तिशाली हेडक्वाटर बनाउने पक्षमा छैनौँ । ७० वर्षमा पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट विदा लिने संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं । एक व्यक्ति, एक पद र दुई कार्यकाललाई अवलम्वन गरिने छ । हामी कुवाजस्तो नभई नदीजस्तो पार्टी बनाउन चाहान्छौँ । यसैगरी हाम्रो मुख्य लक्ष्य समृद्धि हो । यसर्थ हामी सम्पूर्ण जनतालाई विकास, समृद्धि र निर्माणका लागि क्रियाशील हुन उत्प्रेरित गर्दैछौँ । हामीले सुशासन, सदाचार, समावेशी/सहभागितामूलक लोकतन्त्र, स्वाधीनता, सावभौमिकता र समुन्नत समाजवाद जस्ता ५‘स’मा प्रतिवद्धता जनाएका छौं । हामी बन्द हड्ताल गर्ने पार्टी बनाउदै छैनौँ । सरकारी शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई पार्टी राजनीतिमा नलगाउने भनेका छौं । हाम्रा विद्यार्थीहरु घोचा बोकेर तोडफोड गर्न जुलुसमा हिड्ने छैनन् ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा हामीले नेपालको विविधतालाई स्विकार गरेका छौँ । जसकालागि हामीले तीन मुख्य जातीय समुदाय, आर्यखस, थारु मधेस र आदीवासी जनजाती सहित महिला, दलित र अल्पसंख्यकहरुको समान संलग्नता र स्वामित्व सहितको पार्टी बनाउदैछौँ । यी नवीन प्रस्तावहरु हुन् । यस्तो अभ्यास नेपाली राजनीतिमा कसैले यो भन्दा पहिले गरेकै थिएनन् । हामी जे भन्छौ त्यो गर्दैछौं र त्यो नयाँ गर्दैछौं । हाम्रो नारा नै छ ‘अवको निकास, आर्थिक विकास’ । नेपाली राजनीतिमा यो वैकल्पिक साेच हो । यसर्थ हामी नयाँ पार्टी मात्र बनाईरहेका छैनौ, वैकल्पिक राजनीति बनाउदैछौँ ।
नयाँ शक्तिको भेलापछिको कार्ययोजना कस्तो छ र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
हामीसँग यो भेलापछि एउटा पार्टी हुनेछ । हाम्रा राजनीतिक, सांगठनिक र समृद्धिका योजनाहरु हुनेछन् । हामीसँग नयाँ गर्न उत्सुक लाखौं स्वयंसेवी, सदस्य र अभियन्ताहरु हुनेछन् । यी सबैको पहलकदमीमा हामी पार्टीलाई नेपाली राजनीतिको विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्दछौं । हामी यसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी र राजनीतिक धार बनाउने छौँ । समकालीन राजनीतिको नेतृत्व गर्ने उन्नत विचार र नेतृत्व निर्माणगर्नु हाम्रो अवको कार्ययोजना हुनेछ ।
पार्टी घोषणा नहुँदै पूर्व माओवादी र गैरमाओवादीबीच विवाद छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
हामी मुद्दाहरुमाथि वहस गरिरहेका छौं । निश्चय नै, हामी साधारण छलफलमा मात्र छैनौँ, महाछलफलमा छौं । किनभने हामी छलफल गर्नकैलागि यहाँ छौँ । नेपाली राजनीतिमा छलफल आवश्यक छ त्यसैले यो सबै भईरहेको हो । कस्तो पार्टी बनाउने, कसरी यसलाई नयाँ विकल्प बनाउने भन्ने प्रश्नहरुमा हामी गहिरो छलफलमा छौं । हामीबीच विवाद छैन । त्यसैले हामी संगै छौँ । हामी मुर्दा शान्तिमा विश्वास गर्दैनौं । हामी जिवन्त छलफलमा विश्वास गर्दछौँ । हामी विभिन्न विचारको स्कुलबाट यहाँसम्म आएका मान्छेहरु हौं । त्यसैले वहस हुनु स्वभाविक छ । हामी विचारको विविधता, ब्यक्तिको सार्वभौमिकता र त्यसले निर्माण गर्ने रचनात्मक विकल्पहरु खोज्दैछौं । हामी छलफललाई प्रोत्साहित गर्ने पार्टी बनाउदैछौँ । त्यसैले हामीबीच विवाद छैन बरु उत्साहपुर्ण छलफलहरु भने भएका छन् ।
तपाईंहरु सफल हुने आधार के-के छन् ?
हामी सफल हुने सयौँ आधारहरु छन् । पार्टी घोषणा नहुदै हामीसँग एकलाख सदस्यहरु छन् । हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ जनताको स्वागत पाउँछौँ । नेपाली जनताले कस्तो राजनीति खोजेका छन् भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । हामी जनताको विश्वासलाई कायम राख्नेछौं । हामी नेपाली जनताले खोजेजस्तै पार्टी बनाउन चाहन्छौँ । त्यसैले हामी सफल हुन्छौँ । नेपाली जनतालाई थाहा छ हिजोको नेपाली राजनीतिले पटक पटक जनताको सपनामाथि खेलवाड गरेको छ । हामी त्यो गर्ने छैनौँ । हामी जे भन्छौँ, त्यहि गर्छौँ । हामी सुशासन र सदाचारमा प्रतिवद्ध छौँ । यसर्थ, एउटा सक्षम खेलाडीलाई जसरी आफ्नो विजयमा विश्वास छ त्यसरी नै हामीलाई पनि हाम्रो सफलतामा विश्वास छ । हाम्रो आत्माविश्वास, हाम्रो वैकल्पिक प्रस्ताव र जनताको समर्थन नै हाम्रो सफलताको आधार हो । मालीलाई आफ्नो फूलको बारेमा थाहा हुन्छ । हामीलाई पनि हाम्रो सुन्दर देश र यहाँको साझा फूलवारीका बारेमा थाहा छ । त्यसैले हामी सचेत प्रयत्नबाट यो देश बनाउने प्रस्ताव गरिरहेका छौं । त्यसैले हामी सफल हुन्छौँ ।
एजेन्सी, ९ फाल्गुन । इरानमा आज संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । शुक्रबार बिहानदेखि नै मतदाताहरूले मतदान गर्न सुरु गरेको इरानको सरकारी...